Ukudlulela Ebudaleni kwabaNtwana
Indima yabesifazane baseNtwana njengabafazi nabomama kubonakala ekuguqweni kwengubo yendabuko egqoke ngezigaba ezahlukene zokuthuthukiswa. Izigaba zithi: i-lesa (umntwana); mosetsana (intombazane); i-ithumaisa (intombazane engabanjwanga); i-sealogana (isikhathi esiphezulu); i-mothepa (intombazane eqalisiwe); futhi kgarebe (osemusha ovuthiwe).
Kuphela emva komshado futhi ikakhulukazi emva kokuzalwa kwengane yakhe yokuqala yindodakazi yaseNtwana eyathola isimo se-mosadi okusho kokubili owesifazane nomfazi.
Imisebenzi yokuhamba, njengemikhuba ezayo, emishadweni kanye nokungcwaba, yenziwa emagcekeni omakhaya. Ngaphambi kwemikhosi yokuqala (i-byale) eyingxenye ye-asiya (sonke isikhathi sokuqala), amantombazane asebasha asebenza ekukhuleni. Lo mkhosi wangasese, njengoba amantombazane aseNtwana anikezwa isimo seqembu elisemthethweni kuphela emva kokuqala.
Ngesikhathi sokuqalwa, njengalabo abesilisa abaqalayo, basesimweni sokuguquka - abafana nabantwana noma abadala. Ngalesi sikhathi, lapho besengozini emandleni amonakalo, bagcinwa ekusithekeni. Uma intombazane encane iqala ukuya esikhathini, ihlukaniswe izinsuku ezimbalwa.
Khona-ke unikezwa isikhumba sesikhumba (isibhamu) esincane kakhulu esihlotshiswe ngemigqa yezinkinobho kanye nesikhumba sesigqoko, esibonisa isigaba esisha ekuziphendukeleni kwakhe kusukela kwengane kuya kumfazi. Ubuye agqoke i-ntepana, inguqulo encane yomugqa wesifazane oshadile. Njengesihlahla sokuzivikela, kuvame ukuhlobisa kuphela ngezinkinobho kanye nezintambo ezihambayo ezihambayo ezihambayo ezifanayo ezifana nezitholakala kuma-aprons angemuva wabesifazane abashadile.
I-yale iqondiswa umkami oyinhloko, inkosikazi, futhi iqala amantombazane. Le nqubo ihlanganisa ukusika izinwele, lapho izinwele zamantombazane zifaniswa nesihlalo sebhayisikili (hlotshwana) futhi zihlutswe ngamakha namafutha, kanti ubuso babo benziwa ngama-fat and ocher obomvu. Amantombazane anikezwa ama-aprons esikhumba ngamama abo abagqoka nge-ntepana. Amabele abo avuliwe, izingalo zabo zigcwele amabhungane etshani (ditokwa) futhi zigqoka ubuhlalu (mathala) ezungeze izintamo zabo.
Ngemuva kokuphumula kokuqala abaqashi bachitha inyanga endaweni yokuhlala lapho bethola khona imfundo yezocansi neyekhaya. Bayekwa ukusoka okulinganayo kanye nokwebiwa kwe-labia minora. Lesi sigaba sibonakala ngokucula nokudansa ebusuku, kuqinisa izibopho phakathi kwabaqalayo.
Bafundiswa indlela yokwenza izidoli zokuzala (i-gimwane noma i-popenyane) namasaka emfuleni utshani (legolo) nokuhlobisa izigqoko zasemakhaya (umgogodla). Esikhathini sokugcina sokuqala kwabo, amantombazane abizwa ngokuthi yi-boramaswaile, futhi agcwele umlotha ngaphambi kokuba abuyele ekhaya lapho anikezwa khona isimo se-kgarebe.
Kubantwana baseNtwana, inqubo yokuqalwa - njengaleyo ekhuthazwe ngabalingani babo besifazane - igcizelela isimo sabo sesikhathi esiphezulu futhi ibalungiselela indima yabo yesikhathi esizayo emphakathini. Abesilisa abasha abasesigqokeni bagqoke amabhande wesifazane futhi izinwele zabo zikhonjiswe ebhodini lokuklama ibhayisikili labaqalayo besifazane.
Bazungeza izigqoko zabo bagqoke ama-hoops ohlaza utshani abahlelwe ngokuhlelwa komhlophe, obomvu nokumnyama noma okwesibhakabhaka, okulandelwa i-pink - ukulinganisa amalungiselelo ombala agqoke abesifazane ababili abaqashiwe nabashadile. Ngemuva kokuqalwa, amadoda aseNtwana achitha zonke izibonakaliso ze-androgyny futhi acabange ngokucacile, echazwe indima yomphakathi.